उनलाई सोध्नुस् भोक के हो ? - Rato Pana
भक्तपुर, ११ जेठ
भोक खेपन नसकेर चितामा जलेर खरानी हुन नपाएको मान्छेकै मासुपनि बटुलेर खाने गरेका उद्धारको समयमा उनीबारे थाहा पाउनेहरु बताउँदै थिए ।
४ कक्षा पढ्दा पढ्दै बा आमाको झर्किफर्कि र साथिभाईको सँगतको कारण उनले १२ बर्षको उमेरमा घर छाडे । आफूलाई जन्मदिने आमाबाबा बाट नपाएको माया यो विरानो शहरले काहाँ पूर्ति गर्न सक्थ्यो र ।
सानै उमेरमा परिवारबाट एक्लिएपछि उनले भक्तपुर र काठमाडौंमा कार्टुन र प्लाष्टिक उठाउन थाले । नयाँ ठाउँ, शहरी रहनसहन उनलाई शुरुवातका दिनहरुमा त केही रमाईलो नै थियो । साथीभाईको साथले उनले संसार जितेझै ठान्थे ।
सबैकुरा सधै उस्तै कहापो हुन्थ्यो र ? कार्टुन र प्लास्टिक उठाउन नसकेको दिन वा पेटभर खान पुग्ने पैसा नकमाएको दिन भोकै बस्नुपथ्र्यो । समयसँगै उमेर बढ्दै गयो । जीवनको धरातल र बास्तविकता विस्तारै समझमा आउन थाल्यो । भोक भोकै बस्नुपरेका अनुभव त उनीसँग यतिधेरै छन् सायद चाहेर पनि जीवनभर विर्सन सक्दैनन् ।
मानवसेवा आश्रमका उद्धार टोलि कमलपोखरी भक्तपुर पुग्दा उनी बाटोमा कसैले फालेको फोहोर टिपेर खाँदै गरेका अवस्थामा भेटीएका थिए । जगातिको हनुमान थान नजिकै सडकपेटीमा रहने उनले भोक खप्न नसकेर चितामा जलेर खरानी हुन नपाएको मान्छेकै मासुपनि बटुलेर खाने गरेका उद्धारको समयमा उनीबारे थाहा पाउनेहरुले बताउँदै थिए ।
उनले १२ बर्ष सडकमै कष्टपुर्ण जीवन विताए । अब उनी झण्डै २५ बर्षका पुगिसकेका छन् । उनलाई पढ्न मन नभएको पनि होईन, तर उनले चाहेर पनि आफ्नो बाल्यकाल फर्काउन सक्दैनन् । उनलाई फेरी १२ बर्षकै उमेर फर्केर विद्यालय जाने रहर त छ, तर त्यो कुरा कल्पना मात्रै रहयो ।
मानवसेवा आश्रमले उद्धार गरिदिएकोमा उनी खुशी छन् । कम्तिमा एक गाँस भोजनको लागि उनले अब छट्पट्टिन परेको छैन । बा आमाले लगे घर गएर सहयोग गर्ने, नत्र आश्रममै सेवा गर्ने उनको चाहाना छ ।
सडकजीवन नै विताएपनि जाँड रक्सि र दुर्वसनको लत नभएका उनलाई राम्रो मार्गमा हिडाउँन सकियो भने अझैपनि उनको जीवनबाट निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । २०७८ बैशाख १० गते सुर्यविनायक नगरपालिका–१० कमलविनायक, भक्तपुरबाट उद्धार गरिएका उनी मानवसेवा आश्रम भक्तपुर शाखाको कौशलटार सेवाकेन्द्रको संरक्षणमा छन् ।
उनी अर्थात सुमेरु मगरको मासिक पालनपोषण खर्च वेहोरी निजको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहानुहुन्छ भने मानवसेवा आश्रम भक्तपुर शाखाको सेवामा समर्पित अभियान्ता काव्या पोखरलाई ९८६७२४९४३० मा र विवेक महतोलाई ९८४४५७१३७४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा वा मानवसेवा आश्रम भक्तपुर शाखाको सम्पर्क फोन : ०१६६३१५०७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
आश्रमका स्वयंसेवक विवेक महतोको सहयोगमा तैयार पारिएको रिपोर्ट
राजनीतिक व्यक्तित्वबाट धोका हुन सक्छ।
पर्सामा ४१ जनामा मात्र काेराेना पुष्टि
अस्पतालको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तजन द्वारा प्रदर्शन
Ratopana March 26, 2021 March 26, 2021
हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै राप्रपाद्वारा आन्दोलन घोषणा
वीरगंजका पानी उद्योगहरू छड्के अनुगमन